Mgbe mmetụta bụ kemgwucha mgbanwe software omume, na ebe ya isi elekwasị anya bụ na-emetụta ma tinye onye video mmepụta, ọ ga-eji na-eme ụfọdụ edezi dị ka mma. Mgbe mmetụta nwere ọtụtụ ngwaọrụ-ekwe ka ị na-eme ọtụtụ edezi ihe aga-eme na ị ga-adịghị atụ anya, na taa anyị na-atụle ịcha video, ma ọ nwere ike mere mgbe mmetụta ma ọ bụ. Azịza mkpụmkpụ bụ na ee, ọ nwere ike, ma na e nwere obere ihe na ya karịa nke ahụ, anyị ga-esi na-ahụ mgbe e mesịrị, ma mbụ, m ga-egosi otú mfe ọ bụ bee gị video site na iji adobe usoro.
1. Launch Mgbe mmetụta na mbubata gị video
Mbụ ozi bụ na-emeghe ọhụrụ oru ngo, na ibu gị video n'ime ya. Akpa oyi site na isi menu bụ họrọ ọhụrụ mejupụtara.
Nke ahụ ga-emepe ahụ mejupụtara menu, ịhọrọ mkpebi na na na ị chọrọ, mgbe ahụ ike gị mejupụtara.
Ugbu a unu bụ njikere mbubata gị video.
Nke a na-enweta site na faịlụ / ibubata menu ka anyị na-ahụ ebe a
Ozugbo i nwere gị video, ị nwere ike ịdọrọ ya n'ime usoro iheomume dị ka anyị na-ahụ n'okpuru ebe a.
Ugbu a, lee m video clip bụ a otutu nta ma mkpumkpu karịa m mejupụtara, ma n'ihi nzube nke a ọ na-adịghị mkpa n'ezie. Ị nwere ike iji nke a mmetụta ezie na, dị ka Mgbe mmetụta, i nwere ike inwe ahụ n'ezie video ibiaghachi gburugburu n'ime ihe ndị mejupụtara dị ka ọ na-akpọ, na-akpali mmetụta na-agbalị.
2. Edezi video
Iji mee ka ihe ghọtakwuo, m Nzọụkwụ mbụ bụ ka ibubaa usoro iheomume otú m nwere ike ịhụ n'ụzọ doro anya mmalite na ọgwụgwụ nke m video track.
Ugbu a, m nwere ike na-amalite ibelata video track n'ime iberibe m chọrọ. Nke a bụ nnọọ mfe, họrọ video track na usoro iheomume, megharia ndu kpọmkwem isi ihe ị chọrọ bee track, na mgbe ahụ ị nwere ike ma na-eji edit menu Dezie> gbawara n'etiti oyi akwa ma ọ bụ shortcut Control + Mgbanwe + D.
Edi kûfre ụzọ ị imezu ya, nke a doo gị gị video track gbawara n'etiti, na nke abụọ akụkụ na-gbanwere gaa n'ime a iche iche oyi akwa kwa otú i nwere ike tinye na mgbanwe mmetụta na na dị ka ị chọrọ.
N'ezie, ị na-agaghị nanị otu ịkpụ, ị pụrụ ime ka ọtụtụ dị ka ị chọrọ na-enwe ike ime re-hazie ha na otú na ọ bụrụ na ị chọrọ.
3. agbakwunyere ngwaọrụ
E nwere ọtụtụ uru na ịcha otú a, na na iche iche n'ígwé nwee nnọọ mgbagwoju mmetụta na nhazi ka a mere na akụkụ nke ọ bụla video kpamkpam n'adabereghị, ha nwere ike mfe a ga-reordered nakwa na-enweghị nsogbu.
Dị ka anyị pụrụ ịhụ n'ebe a, video ga-arụ kpamkpam dị iche iche iji ugbu a. Otu n'ime ihe ndị i nwere ike ime nnọọ mfe Ozugbo i nwere nke a bụ iji tinye mgbanwe mmetụta, nanị mata a mgbe na usoro iheomume ebe mgbanwe bụ na-amalite, ma họrọ onye si mmetụta menu.
Ozugbo kwukwara i nwere ike ịgbanwe oge iwere na na na-kpọmkwem mmetụta ị chọrọ.
Ị nwere ike N'ezie ihichapụ ọ bụla clip ị na-achọghị nanị site ihichapụ na oyi akwa.
4. exporting faịlụ
Ozugbo ị bụ obi ụtọ ị nwere ike ahụ mbupụ okokụre faịlụ site na faịlụ> bupu menu
Ị na-ahọrọ 'tinye ijere kwụ n'ahịrị' ihe ị na-aza menu ekwe ka ị na-ahọrọ na-ntọala, filename na ebe nke ikpeazụ mmepụta dị ka gị mkpa.
Na nke ahụ bụ otú mfe ọnwụ video bụ na Adobe Mgbe mmetụta.
Dị ka anyị gosiri, ọ bụghị nanị na o kwere omume, ma pụtara n'ụzọ kwụ ọtọ bee video na Adobe Mgbe mmetụta, na n'ihi na ọnọdụ ụfọdụ o nwere ike ịbụ nnọọ uru, Otú ọ dị, software na-adịghị mere maka nke a ụdị ọrụ na e nwere mma ngwaọrụ si e ime ya. Adobe onwe Premiere Pro awade a ukwuu braoder nso nke ngwaọrụ n'ihi na ọnwụ na trimming na-eme ka a nnọọ mma ikpo okwu maka usoro. Ke adianade do e nwere ọtụtụ video editọ na niile Amawaputala e mere kpọmkwem n'ihi na ọnwụ na trimming video na ma eleghị anya na-ewetara a mma nhọrọ karịa iji Mgbe mmetụta na imezu ya.
Video edezi dị nnọọ otu ebe nri ngwá ọrụ maka nri ọrụ bụ eze, na ebe ị nwere ike ina ihe mere n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ọtụtụ ihe, ọtụtụ mfe ịga maka nri ngwá ọrụ oge ọ bụla.
Adobe Mgbe mmetụta bụ a kediegwu ngwaahịa maka agbakwunye mmetụta na animations n'ime oru ngo a, ikekwe ndị kasị mma nke ya obiọma, na ebe ọ ga-eji bee video, ajụjụ kwesịrị ịbụ ihe ị chọrọ. Na-ahụ azịza nke ga-abụ, na ọtụtụ mgbe, ọ dịghị.
Nke a bụ isi nkuzi banyere Adobe Mgbe mmetụta, ọkachamara video edezi software. Otú ọ dị, ọ bụrụ na video edezi bụ ihe ọhụrụ nye gị, tụlee Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor). Nke a bụ ike ma mfe na-eji ngwá ọrụ maka ọrụ dị malite si. Download free ikpe version n'okpuru.
Olee otú Mepụta Motion Graphics na Mgbe mmetụta
HD Video Editor: Olee dezie HD (High Definition) Videos
> Resource> Video> otú bee Video na Mgbe mmetụta